အမျိုးသမီးများအတွက်ခေတ္တ Tatto အတုများ Sexy Lace Lotus Pendants များကိုဝယ်ယူရန် - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်မရှိပါ WoopShop®
အမျိုးသမီးများအတွက်ခေတ္တ Tatto အတု Sexy ဇာဇာ Lotus Pendants
အရောင် GLZ176 GLZ195 GLZ174 GLZ175 GBZ113 GBZ114 GLZ162 GLZ164 GLZ166 GLZ167 GBZ115 GLZ165 GLZ140 GLZ141 GLZ136 GLZ137 GLZ152 GLZ155 GLZ142 GLZ144 GBZ099 GBZ112 GLZ134 GBZ104 GBZ111
GLZ176 GLZ195 GLZ174 GLZ175 GBZ113 GBZ114 GLZ162 GLZ164 GLZ166 GLZ167 GBZ115 GLZ165 GLZ140 GLZ141 GLZ136 GLZ137 GLZ152 GLZ155 GLZ142 GLZ144 GBZ099 GBZ112 GLZ134 GBZ104 GBZ111
အမျိုးသမီးများအတွက်ခေတ္တ Tatto အတု Sexy ဇာဇာ Lotus Pendants - GLZ176 backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
Size: 21 * 15CM
အမျိုးအစားအမျိုးအစား - အမျိုးသမီးများအတွက် Sexy ဇာဇာ Lotus ဆွဲပြားတက်တူးများ
ပုံစံ - ရေလွှဲပြောင်းပေးသောယာယီ Tattoo စတစ်ကာ
အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခဏတာတက်တူးထိုးထားတာအရမ်းလှတာပေါ့။ မလုပ်ရသေးဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့သမီးအတွက်နှစ်သစ်အတွက်လက်ဆောင်အဖြစ်ယူလာကြတယ်။ ပေးပို့ပြီးနောက်ပြန်လည်သုံးသပ်ငါဝယ်ယူရန်အကြံပြု!
2,5 ပတ်ကြာလာခဲ့သည်။ အရည်အသွေးတက်တူးထိုးပေမယ့်သေးငယ်တဲ့)))
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပုံလိုပဲ က intact.Speedy ပေးပို့ရောက်ရှိခဲ့သည် !!! ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!!!! ကျွန်ုပ်ဓာတ်ပုံရိုက်သောအခါဓာတ်ပုံရိုက်ပါမည်။